मलेसियामाथिको शानदार जितपछि नेपालका कप्तान पारसको विश्वभरी प्रशंसा : भने कप्तानीत यस्तो पो ! « Janaboli
मलेसियामाथिको शानदार जितपछि नेपालका कप्तान पारसको विश्वभरी प्रशंसा : भने कप्तानीत यस्तो पो !
काठमाडौ । मलेसियामा जारी आइसिसी विश्व टी–ट्वान्टी क्रिकेट अन्तर्गत एसिया छनोट समूह ‘बी’ मा आफ्नो दोस्रो खेलमा पनि नेपाल विजयी भएको छ । आज भएको खेलमा घरेलु टिम मलेसियालाई आठ विकेटले पराजित गर्दै दोस्रो खेलमा पनि नेपाल विजयी भएको हो । मलेसियाले दिएको १०१ रनको लक्ष्य नेपालले २ विकेटको १२.४ ओभरमा भेट्टायो ।
नेपालका लागि आज कप्तान पारस खड्काले अर्धशत प्रहार गरे । उनले ३७ बल खेल्दै ५२ रनमा अविजीजत रहे । उनले पाँच चौका र २ छक्काको मद्दतले सो रन बनाएका हुन् । यस्तै, उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल २७ रनमा अविजीत रहे । उनले २ चौका र एक छक्का प्रहार गर्दै २७ रनमा नट आउट रहेका हुन् । यसअघि नेपालले २ विकेट सस्तैमा गुमायो । पहिलो विकेटका रुपमा नेपालका अनिलकुमार शाह १ र विनोद भण्डारी १२ रनमा आउट भएका थिए ।
बलिङमा मलेसियाका पवनदिप सिंह र सायदले समान एकएक विकेट लिए । यसअघि मलेसियाले टस जितेर ब्याटिङ गर्दै १९.३ ओभरमा अल आउट हुँदै १०१ रन बनाएको थियो । आज उसका लागि मोहम्मद सरफिले ४९ रन बनाउनु बाहेक अन्य ब्याट्सम्यानको प्रदर्शन राम्रो रहेन ।बलिङमा नेपालका लागि सन्दिप लामिछानेले पाँच विकेट लिए । उनले ४ ओभर बलिङ गर्दै २० रन खर्चदैं पाँच विकेट लिन सफल भएका हुन् । यस्तै, सोमपाल कामीले ३, कप्तान पारस खड्काले १ रन लिन सफल भए ।
कप्तान खड्काले एक ओभर मेडन दिन सफल पनि भए । यस्तै, एक मलेसियाली खेलाडी पारसको बलमा रन आउट भए । खेल मलेसियामै भइरहेको छ । पहिलो खेलमा म्यानमारलाई ८ विकेटले हराएको नेपालले आफ्नो दोस्रो खेलमा शनिबार मलेसियासँग खेलिरहेको हो । यो खेलमा नेपालका कप्तान पारस खड्काको खुबै प्रशंसा गरिएको छ । विश्वसमुदायले नै वाऊ कप्तानी त यस्तो पो त भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका छन् ।
१९ वर्षीय नेपालका क्रिकेट खेलाडी लामिछानेलाई मिल्यो यति ठुलो अन्तराष्ट्रिय सफलता
काठमाडौं । नेपालका क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछाने क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सिपीएल) सिजन २०२० को खेलाडी
काठमाडौं । अनलाइन कराते कातातर्फ नेपालले १० पदक जितेको छ । नेपालले आईएसकेयू इन्टरनेशनल अनलाइन
२७ वर्षकैँ उमेरमा चर्चित खेलाडी वीरमानको निधन, नेपाली सेनाले दियो अन्तिम सलामी
काठमाडौं । उसु खेलाडी वीरमान वाइबाको सोमवार अन्त्येष्टि गरिएको छ । उहाँको धार्मिक विधि तथा
बङ्गलादेशमा महामारीका समय मेसीको जन्मदिन मनाउने व्यक्तिलाई जरिवाना
ढाका, ११ असार (रासस÷एएफपी) ः महामारीको समय लकडाउनको अवज्ञा गरी प्रसिद्ध अर्जेन्टिनी फुटबल खेलाडी लियोनल